Global Voices teny Malagasy » Maherin’ny 100 Ireo Olona Novonoina Ivelan’ny Fitsaràna Tany Bangladesh Tamin’ity Taona Ity · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Aogositra 2015 2:38 GMT 1	 · Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) Nandika (en) i Pantha Rahman Reza, Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Vao haingana, nisondrotra  kely niala teo amin'ny harin-karena ambany ho amin'ny antonontonony ny harin-karen'i i Bangladesh teo anatrehan'ny Banky Iraisam-pirenena. Fanampin'izay, nihena ny fahantrana teo amin'ity firenena Aziatka Tatsimo ity, nitombo isa ny vehivavy mpianatra any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa ary nahita fahombiazana vitsivitsy mikasika ny fampihenana fahafatesan'ny zaza teraka sy ny reny.
Ny mpiaro zon'olombelona, Ain O Shalishi Kendra (ASK), namoaka lahatsoratra mampiseho  fa, tao anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity, 101 ireo olona niharan'ny famonoana ivelan'ny fitsaràna  nandritra ny fitànana am-ponja nataon'ireo sampan-draharaha sy mpampihatra ny lalàna isankarazany. Olona iraika amby roapolo no tsy hita popoka na nalaina ankeriny ary 132 no maty vokatry ny herisetra ara-politika.
Araka ny tatitry ny Daily New Age , maty vokatry ny fanjavonana an-terisetra ny taona 2007 hatramin'ny taona 2014 ny olona maherin'ny 200, ny ankamaroany dia mafàna fo ara-politika.
Saiful Islam, mpikambana fahiny tao amin'ny Parlemanta no anisany tao anaty lisitr'ireo olona tsy hita. Voalaza voalohany indrindra ho tsy hita ny volana Novambra 2013 izy. Tsy fantatry ny fianakaviany izy na velona na maty. Tamin'ny fandraisana anjara taminà seminera mikasika ny Andro Iraisam-pirenena Ho an'ireo Fanjavonana An-terisetra tao Dhaka, nilaza  ny zanany vavy Mashrufa Islam fa:
Dr. Shahdeen Malik , mpisolovava ao amin'ny Fitsàrana Avo sady lehiben'ny “Brac University School of Law”, niteny tamin'ny tafatafa niaraka tamin'ny Daily Star fa ny “kolontsain'ny tsimatimanota ” no antony fototra mahatonga ireo fanjavonana an-terisetra mahazo toerana ao Bangladesh.
Manambara  ny fianakavian'ireo olona nanjavona fa ny mpitandro ny filaminana sy ireo hery manokana, indrindra fa ny Rapid Action Battalion , no tafiditra amin'izany. Saingy ny fanjakana, zara raha mandray andraikitra manohitra ireo hery ireo. Tao anaty tatitra  iray nivoaka ny volana Septambra teo, nambara ny “Amnesty International” hoe :
#BANGLADESH : tsy hitsahatra velively ny #Fanjavonana  raha tsy mifarana ny #tsimatimanota : http://t.co/Bzt0XCmN 
Azafady akaro ny feonareo ankehitriny mba hampiatoana ny #famonoana  #ara-pitsaràna  & #fanjavonana  #an-terisetra  eto #Bangladesh . Rahampitso mety ianao no #iharany  koa. Manaova hetsika izao!
Mitsangàna #fanjavonana  #an-terisetra  eto #bangladesh  http://t.co/xD16ubA4Ep  Inona marina no tena zava-mitranga eto amin'ny firenena amin'ny anaran'ny #lalàna ?
Nahavita dingana goavana ny Rapid Action Battalion tamin'ny fifehezana ireo Islamista Mpikatroka ao Bangladesh. Saingy hatraiza hatraiza, niatrika tsikera mikasika ireo fanitsakitsahana zon'olombelona izy ireo no sady voasoketa ho nanao famonoana ivelan'ny lalàna. Human Rights Watch, fikambanana iraisam-pirenena mpiaro ny zon'olombelona, dia nanoso-kevitra hoe foanana  ilay hery manokana. Nomarihan'ny Tatitry ny Departemantam-panjakàna Amerikana momba ny Fampiharana ny zon'olombelona tamin'ny taona 2014, ho toy ny olana manan-danja indrindra momba ny zon'olombelona  any Bangladesh ireo famonoana ivelan'ny fitsaràna sy ny fanjavonana an-terisetra.
Ny Andininy faha-32 amin'ny lalàmpanorenan'i Bangladesh  manome antoka fa tsy misy olona natao tsy hanana fiainana na fahafahana manokana izany. Saingy Sharif Hasan sy Lam-ya Mostaque nanoratra  tao amin'ny Dhaka Tribune fa an-taratasy fotsiny ihany io andinin-dalàna io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/08/07/71725/
 lahatsoratra mampiseho: http://www.askbd.org/ask/2015/06/25/bulletin-june-2015/
 niharan'ny famonoana ivelan'ny fitsaràna: http://www.dhakatimes24.com/2015/06/30/72454/%E0%A6%9B%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%A7,-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%AE-%E0%A7%A8%E0%A7%AF
 ny tatitry ny Daily New Age: http://newagebd.net/43330/time-to-end-enforced-disappearances/#sthash.kYJq5iEU.dpbs
 kolontsain'ny tsimatimanota: http://www.thedailystar.net/picked-up-they-never-return-39283
 olana manan-danja indrindra momba ny zon'olombelona: http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article988647.bdnews
 Ny Andininy faha-32 amin'ny lalàmpanorenan'i Bangladesh: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=367&sections_id=24580